Baolina kitra – FMF : Ahemotra ny fifidianana ny filoha -
AccueilVaovao SamihafaBaolina kitra – FMF : Ahemotra ny fifidianana ny filoha
Na dia miezaka mafy amin’ny fanondrotana ny kitra malagasy aza ny teknisianina sy ny mpilalao eny ambony kianja, manimba sy manahirana ity fanatanjahantena ity kosa ny fitavozavozana eo amin’ny resaka fitantanana. Raha tokony hotanterahina ny 27 oktobra izao ny fifidianana, izay ho filohan’ny federasiona malagasin’ny Baolina kitra, na ny FMF, dia voatery ahemotra amin’ny fotoana mbola tsy voafetra izany. Ny 1 oktobra lasa teo, dia nisy ny taratasy avy amin’ny federasiona iraisam-pirenen’ny baolina kitra, na ny FIFA, mampatsiahy ireo mpitarika vonjimaika ny federasiona amin’ireo tranga tsy tomombana, tsy ahafahan’ny FMF manatanteraka ny fifidianana federaly.
Io taratasy nosoniavin’ny sekretera jeneralin’ny FIFA, Fatma Samoura dia nampatsiahy ireo tsy fahatomombanana ireo izaymifantoka amin’ny tsy fahavitan’ny fifidianana teny anivon’ny ligy ho an’ny faritra telo dia Vatovavy Fitovinany, Matsiatra Ambony ary Bongolava. Izany dia niainga avy amin’ny tatitry ny iraka nalefan’ny Fifa teto Antananarivo, ny 13 ka hatramin’ny 16 marsa, sy ny fitarainana voarain’ny Fifa. Ny taratasin’ny Fifa dia nanamarika fa efa vita ny fifidianana tany amin’ireo faritra roa voalohany, nefa tsy nisy vokatra noho ny tsy fahatrarana ny isa, ary ny 06 oktobra izao kosa no mety hanatanterahana ny any Bongolava.
Andrasana araka izany ny daty sy ny fandaharam-potoana vaovao avoakan’ny FMF amin’ny fanatanterahana ny fifidianana, izay ho filohan’ny federasiona. 9 hatreto ireo kandidà nametraka ny firotsahany, ary miandry ny fanapahan-kevitry ny kaomisiona mikarakara ny fifidianana ny tohin’ny tantara.
Taorian’ny fitazomana teny amin’ny mpitandro ny filaminana ilay artista voarohirohy amin’ny raharaha “fifosana anaty facebook” dia hiakatra fampanoavana anio sabotsy ny raharaha. Tsy iza io artista voalaza io fa i Hiary Rapanoelina, mpamorona ary mpandrindra ...Tohiny